Sony Elektronika dia mandefa ny fanampim-baovao farany ho an'ny andian-tsarimihetsika feno G Master ™ miaraka amin'ny maivana sy malefaka 35mm F1.4 G Master ™ | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Creation » Sony Elektronika dia mandefa ny fanampim-baovao farany ho an'ny andian-tsarimihetsika feno G Master ™ miaraka amin'ny maivana sy Compact 35mm F1.4 G Master ™
Sony Electronics Inc. androany dia nanambara ny FE 35mm F1.4 GM (modely SEL35F14GM) - ny fanampim-baovao farany amin'ilay andian-tsarimihetsika feno endriny G Master- manome ny kalitaon'ny sary kilasy voalohany sy bokeh tsara tarehy amina endrika maivana sy maivana. Rehefa ampiarahina amin'ny vatan'ny fakantsary E-mount dia manolotra ilay solomaso SonyNy fahaizan'ny AF (autofocus) mitarika indostrialy - tonga lafatra amin'ny fampiasana maro samihafa toy ny sary mitifitra, ny saripika ary ny sary eny an-dalambe, na amin'ny sary na amin'ny horonan-tsary.
"amin'ny Sony, ny tanjontsika dia ny hameno izao tontolo izao fihetsem-po amin'ny alàlan'ny herin'ny famoronana sy ny haitao ka novolavolainay ny FE 35mm F1.4 GM mba hisambotra tanteraka ireo fotoana ilaina hotehirizina mandrakizay ", hoy i Neal Manowitz, filoha lefitra ho an'ny Imaging Products and Solutions America. Sony Elektronika. "Miaraka amin'ny fehin-kevitra kanto sy ny teknolojia mifantoka manan-tsaina, amin'ny endriny kely sy maivana izy rehetra, io dia solomaso tena ilaina izay tsy mampandefitra ny kalitaon'ny sary."
Fanapahan-kevitra miavaka ao anaty lantom-pifandraisana
Sonyny haitao mandroso sy ny teknolojia famokarana mandroso dia mitondra vahaolana miavaka, bokeh tsara tarehy, ary fampisehoana mifantoka mazava tsara amin'ilay masom-baravarana mifamatotra milamina tsara amin'ny felatananao, milanja 18.5 grama fotsiny (524 grama) ary mirefy 3 santimetatra dia. x 3 ⅞ santimetatra (76 mm dia. x 96 mm) miaraka amin'ny savaivon'ny sivana Φ67mm. Ny FE 35mm F1.4 GM dia manasongadina ny haitao optika mandroso izay manome fifanoherana mahatalanjona sy famahana lehibe. Ny singa XA (aspherical mahery) roa dia mitazona vahaolana tsara manerana ny faritra misy ny sary. Misaotra singa ED vera sy fanatsarana optika hafa, ny FE vaovao 35mm F1.4 GM dia mahavita tsara amin'ny jiro sarotra amin'ny alàlan'ny famoretana amin'ny fomba mahomby ny aberration chromatic sy ny volomparasy ho an'ny valiny mahavariana.
Bokeh tsara tarehy
Ny FE 35mm F1.4 GM dia mamoaka vatan-kazo boribory saika boribory noho ny fanamboarany ny lelany 11 - haavon'ny kalitao tsy fahita firy ho an'ny solomaso matevina. Ny fifehezana aberration spherical amin'ny endrika sy ny dingana famokarana dia manampy amin'ny bokeh tsara - toetra mampiavaka ny sonia SonyFilaharana G master master.
Singa XA roa manaova zava-baovao no manampy amin'ny fanakatonana akaiky akaiky miaraka amina bokeh miloko malefaka sy malefaka. Ny fitambaran'ny aperture F1.4 faran'izay betsaka sy ny fahafaha-misafidy mifidy ny halaviran'ny fitifirana tonga lafatra (halaviran'ny fifantohana kely indrindra 10.6 santimetatra (27cm) miaraka amin'ny fanamafisana 0.23x amin'ny maody autofocus) ahafahana mifehy farany sy bokeh mahatalanjona rehefa mitifitra ary horonan-tsary.
Fifantohana mandroso ho an'ny sary an-tsehatra
Ny roa SonyNy XD (mavitrika mahery) Linear Motors dia manome ny fahombiazan'ny tosika avo lenta ilaina amin'ny AF marina (autofocus) sy ny fanarahan-dia - vokatr'izany dia misy vahaolana miavaka amin'ny lavitra rehetra. Algorithma fanaraha-maso avo lenta, novolavolaina manokana ho an'ny XD Linear Motors, manatsara ny valin'ny fanaraha-maso sy ny fametrahana mazava tsara ary mampihena ny hovitrovitra sy ny tabataba ho an'ny fampisehoana AF haingana, malefaka ary mangina.
Ny fifantohana mivoatra dia azo atao ihany koa rehefa mitifitra amin'ny taha ambony.
Linear Response MF dia manome antoka fa ny peratra ifantohana dia mamaly ny fifehezana an-kolaka rehefa mifantoka amin'ny tanana ary mety amin'ny vokatra mifantoka amin'ny famoronana rehefa maka sary. Ny fihodinan'ny peratra ifantohana dia adika mivantana amin'ny fiovana mifandraika amin'izany, ka mahatsapa faingana sy marina ny fanaraha-maso.
Fanaraha-maso sy fahamendrehana matihanina
Ny FE 35mm F1.4 GM dia manolotra fifehezana matihanina feno, ao anatin'izany ny peratra aperture misy fijanonana tsindry azo ovaina, bokotra fihazonana fifantohana azo zahana ary jiro fomba fifantohana izay manohana ny fandidiana tsara sy mahomby. Ny bokotra fihazonana fifantohana dia azo omena asa hafa maro amin'ny alàlan'ny menio fakan-tsary, manome fidirana mivantana amin'ireo fiasa izay tena ilaina amin'ny mpaka sary sy ny mpaka sary.
Rehefa apetraka amin'ny fakantsary APS-C na Super 35, ny FE matevina sy maivana 35mm F1.4 GM dia azo ampiasaina ho solomaso mahazatra mitovy amin'ny 52.5mm zoro fahitana mitovy fijery, ka mahatonga azy io ho safidy mety indrindra amin'ny famoronana horonan-tsary. Ny tombony amin'ny vidéo fanampiny dia misy ny vavahady azo tsindriana, fifadian-kanina AF haingana ary fifantohana amin'ny valiny mivantana.
Ny FE 35mm F1.4 GM dia manohitra ny vovoka sy ny hamandoana[I] famolavolana sy firakotra singa eo anoloana fluor izay manala ny rano, menaka ary loto hafa.
Ilay FE vaovao 35mm F1.4 GM dia ho hita amin'ny volana febroary ary amidy amin'ny $ 1,399.99 USD ary $ 1,899.99 CAD. Hamidy amin'ny karazana Sonympivarotra nahazo alalana eran'i Amerika Avaratra.
Tantara miavaka sy votoaty vaovao manaitaitra nalaina tamin'ny solomaso vaovao sy SonyIreo vokatra fakana sary hafa dia hita ao amin'ny www.alphauniverse.com, tranonkala noforonina mba hampianarana sy hanomezana aingam-panahy ny mpankafy sy ny mpanjifa rehetra Sony α - Alfa marika.
Hisy votoaty vaovao hapetraka mivantana ao amin'ny Sony Photo Gallery. Raha mila fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra, tsidiho azafady:
(Etazonia) - FE 35mm F1.4 GM
Lahatsary iray momba ny vokatra ao amin'ny FE vaovao 35mm F1.4 GM dia azo jerena ETO.
Sony Elektronika dia sampan'ny Sony Corporation of America ary mpiara-miasa amin'i Sony Corporation (Japan), iray amin'ireo orinasam-pialam-boly feno indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny portfolio misy ny elektronika, mozika, sary mihetsika, finday, filalaovana, robotika ary serivisy ara-bola. Manana foibe any San Diego, Kalifornia, Sony Electronics dia mpitarika amin'ny elektronika ho an'ny tsenan'ny mpanjifa sy matihanina. Ny asa dia misy ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny injeniera, ny varotra, ny marketing, ny fizarana ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Sony Ny elektronika dia mamorona vokatra manavao sy manome aingam-panahy ny taranaka maro, toa ny Alpha Interchangeable Lens Cameras izay nahazo mari-pankasitrahana ary ireo vokatra audio revolisionera avo lenta. Sony dia mpanamboatra ihany koa vahaolana farany hatramin'ny farany avy amin'ny fampielezana matihanina 4K sy fitaovana A / V mankany amin'ny indostria mitarika 4K sy 8K Ultra HD Fahitalavitra. FITSIDIHANA www.sony.com/news Raha mila fanazavana fanampiny.
[I] Tsy azo antoka fa vovoka 100% sy tantera-drano.
Previous: Ny NDR any Alemana dia mampifangaro ny StudioDirector 2.0 an'ny CGI ho an'ny Studio vaovao ao Hamburg
Next: Aviteng dia manatevin-daharana ireo mpiara-miasa amin'ny orinasa Cinegy AŞ